करन साउद कैलाली
मानिस आफुलाई सबैभन्दा ठुलो चेतनसिल प्राणी भएको दाबी गर्छ । हुन त आज बिश्वमा तिनै मानवहरु द्वारा विभिन्न किसिमका खोज तलास हुनुका साथै धेरै कुराहरु मानवले नै पत्ता लगाए ।
यो संसारमा मानवीय गुणहरु भएका ब्यक्तिहरु प्राय कम भेटिन्छन् । बिश्वमा मानव जातिको जनसंख्या प्रतिदिन लाखौको हिसाबले बढ्ने गर्छ भने त्यस्तै मृत्युदर पनि कायम छ । जन्म लिएर यो धर्तिमा पाईला टेकिसके पछि जिन्दगीमा कोहि राम्रो गरेर मर्छन त कोहि नराम्रो गरेर पनि । मानवको रुप लिएर जन्मिसकेपछी देश अनि जनता अनि समाजको लागि केही गर्नु नै एक ठुलो उपलब्धि हो । मरेर गएपनी जिउदै सरि तिनै बाचेका हुन्छन् जो बाचुन्जेल केही योगदान दिईरहेका हुन्छन् । त्यही राम्रो काम भित्रको राजनीति अनि समाज सेवा यस्तो शब्द हुन जस्ले राष्ट्र र जनताको हितमा ठुलो भुमिका खेलेको हुन्छ ।
त्यही राजनीति अनि समाज सेवा भित्र यस्ता ब्याक्तित्वहरु पनि छन् जो लक्ष्य सिद्धान्त अनि सहि बाटो लिएर हिडेका हुन्छन् जसलाई हामी चाहेर पनि भुल्न सक्दैनौ । तर त्यही राजनीति लाई हतियार बनाउदै देश अनि जनतालाई प्रयोग गर्दै आफू अनि आफ्ना नातागोतालाई सुख सयल र हालीमुहाली मै रमाउने प्रवृत्ति भएका केही ब्यक्तिहरुले समाज अनि जनतालाई तहसनहस नै बनाएका उदाहरण पनि छन् । अनि कसरी हामिमा मानवता भयो ?
शान्तिका दूध भगवान गौतम बुद्ध जन्मेका देशका नेपाली हामी बिश्वकै प्रख्यात मानिने पशुपतिनाथको मन्दिर भएका नेपाली हामी ठुला ठुला हिमाल पहाड अनि नदिनालाको पानीका धनी हामी नेपाली आज कसरी गरिब बन्यौ कसरी अशान्ती फैलाउन पुग्यौ एक अर्काप्रतिको मान सम्मान अनि दायित्व लाई कहाँ भुल्यौ कसरि भाईभाईमा काटमार गर्न कहाँ बाट सिक्यौ कसरी आफ्नै छिमेकी चेलीबेटी लाई बलात्कार गर्न सिक्यौ कसरी राजनीतिको नाममा फरक फरक पार्टीको नाम लिदै एक आपसमा फुटाफुट गर्न पुग्यौ एक पटक लामो सास लिएर सोचौ त अनि हामिमा हुनुपर्ने गुण अनि मानवता यहि हो ?
यस्ता थुप्रै प्रश्नहरुले मलाई बारम्बार जिस्काईरहेको हुन्छ । अनि आफुलाई ठुलो चेतनसिल प्राणी हो भन्ने महान शब्दको अर्थ यतिखेर बुझ्न कठिन हुन्छ । तसर्थ सकिन्छ आफ्नो कर्तव्य बोधको नाताले होस अथवा दायित्वले होस राम्रो गरौ मानवमा हुनुपर्ने गुणहरु कायम गरौ सकिँदैन भने नराम्रो पनि नगरौ । सबैभन्दा पहिला त आफुलाई चिनौ ।
म को हु ? मैले गर्नुपर्ने दायित्व कर्तव्य के हो ? मेरो लक्ष्य सिद्धान्त बाटो के हो ? यस्ता थुप्रै कुराहरु लागू गरिदैन तबसम्म हामिमा नकारात्मक बिचार उब्जिरहने छन् । यदि भोलिसम्म जिवित नै रहनु छ भने यस्तो काम गरौकी जसलाई मानवले चाहेर पनि भुल्न नसकुन अमरत्व प्राप्ती पनि त्यही हो ।
योगदान दिएर अमरत्व प्राप्त गर्दै देश अनि जनताको लागि शाहस गरेर बलिदान दिने पुरुषहरुलाई हामीले आज पनि सम्मान दिनु पर्छ । हिजो जुन मानवीय धर्म अपनाउदै समाज सेवाको नाममा अनि मानवताको लक्ष्य हिड्नु भएका योद्धाहरु बाटोमा हामिले पनि हिड्न सके सायद अझै हामिमा मानवता कायम हुने थियो कि ?
उहाँहरु अधुरा रहेका सपनाहरूलाई साकार पार्ने तपाईं हाम्रो काम हो । तसर्थ आउनुहोस हराउदै गएको मानवीय धर्म कर्तव्य दायित्व लाई जोगाउ हिजोबाट हामिले सिकेको सस्कार के हो त्यो लाई कायम राखौ असत्य झुठ ईष्र्या रिस राग क्रोध हत्या हिंसा बलात्कार झगडा काटमार जस्ता थुप्रै हाम्रो जिन्दगीमा नकारात्मक कार्यहरु सिर्जना गर्ने शब्दहरुलाई भित्री मनमुटुबाट त्याग्दै सहि र सत्यको बाटोमा हिड्न सिकौ त्यही नै हाम्रो धर्म हो त्यही नै मानवता हो ! मानवता मरिरहेको समयमा मानवतालाई अंगालौ र दानवतालाई भगाऔ ।